महिलाहरूले लगाउने साडीले पनि क्यान्सर निम्त्याउन सक्ने !
विराटनगर, ३ भदौ । क्यान्सर एउटा प्राण घातक रोग हो । कोशिकाहरूको एक समूहको अनियन्त्रित वृद्धि, रोगको आक्रमण र कहिलेकाँही रगतको माध्यमबाट शरीरको अन्य भागहरूमा फैलने रूपमा देखिन्छ । क्यान्सर गम्भीर प्रकारको रोग हो, जसले पैसा र शरीर दुवैको क्षति गर्छ । क्यान्सरलाई बेलैमा पहिचान गर्न सकियो भने रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ ।
क्यान्सरका लक्षण ढिला देखिने गर्छ, चाँडै देखिए पनि नआत्तिकन नियमित रूपमा जाँच र चिकित्सकको परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ । हालै गरेको एक अनुसन्धानबाट अच्चमको कुरा पत्ता लागेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार महिलाहरुले लगाउने साडीले समेत क्यान्सर उत्पन्न गर्न सक्ने प्रमाणित भएको छ ।
पत्याउन निकै गाह्रो होला, तर महिलाको सुन्दरता बढाउने साडीलाई सही तरिकाले लगाउन सकिएन भने यसले क्यान्सरसमेत उत्पन्न गर्न सक्छ भनेर पुष्टि भइसकेको छ । इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनको जर्नलमा प्रकाशित गरिएको एउटा अध्ययनका अनुसार साडीले हुने क्यान्सरका विषयमा तीनवटा अवस्था बारे उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त अनुसन्धानका अनुसन्धानकर्ता डा. जीडी बख्सीका अनुसार साडीमा लगाउने पेटीकोटको कारणले हरेको दिन दिनभरि शरीरको एउटै भागमा बाँध्ने गर्दा यसले कमरमा एउटा स्थायी जलन उत्पन्न गराउछ । सुरु–सुरुको अवस्थामा यो जलनले छाला रातो भएर चिलाउने, पोल्ने जस्तो अनुभूति महसुस हुन थाल्छ । त्यसपछि उक्त स्थानमा छालानै निस्किन गइ घाउसमेत हुन सक्छ ।
यस्तो कुरा छिट्टै ध्यान दिइएन भने यसले विस्तारै विस्तारै क्यान्सरको रूप लिन सक्छ । दिनहुँ पेटीकोट र साडी लगाउँदा सधैं यसको दबाब शरीरको एउटै खण्डमा मात्र पर्ने हुँदा महिलाहरूले साडी लगाउने गर्दा निकै विचार र्पुयाउनु जरुरी देखिन्छ । डा. बख्सी महिलाहरूले साडीका कारण हुने क्यान्सरबाट बच्नका लागि विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् ।
पेटीकोटको इँजार मजाले टाइट पारेर कस्नु हुँदैन । साथै दिनहुँ पेटीकोटलाई एकै ठाउँमा नाबाँधेर घरी माथि घरी अलिकति तल गरेर बाध्नु पर्छ । यसरी एकै ठाउँमा इँजार बाँधेको कारण भएको क्यान्सरको उपचार उक्त महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा निर्भर गर्छ । यो समस्यालाई प्रारम्भिक अवस्थामा पहिचान गर्न सकियो भने सानै शल्यक्रियाबाट उपचार गर्न सम्भव छ ।
तर, यो समस्या शरीरभरि फैलिन गयो भने यसले ज्यानसमेत जान सक्छ । डा. बख्सीका अनुसार महिला तथा पुरुषले लगाउने पेन्ट र बेल्टमा कारण भने यस प्रकारको कुनै समस्या नहुने बताएका छन् । पेटीकोटको इँजारले एउटा सानो खण्डमा मात्रै दबाब दिने तर, बेल्ट तथा पाइन्टले शरीरको ठूलो खण्डमा दबाब दिने हुँदा यस्तो समस्या पाइन्ट तथा बेल्ट लगाउने मानिसलाई यो प्रकारको क्यान्सरको सम्भावना निकै कम हुने देखिएको छ ।